राजनीति – Letang Khabar
लेटाङ, २४ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग(वाईसियल)का लेटाङ नगर अध्यक्ष उर्गेन तामाङ नेकपा एमालेमा प्रबेश गरेका छन् । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै तामाङले नगर अध्यक्ष सहित नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका आफ्ना सम्पुर्ण जिम्मेवारीवाट आफुलाई मुक्त गरि मुलधारको राजनीतिक दल एमालेमा प्रबेश गरको जनाएका हुन् । हालको विषम परिस्थितिमा माओवादी […]
संसद पुनस्थापनासँगै दलहरु सक्रिय, रोकिए विरोध र चुनावी कार्यक्रम
काठमाडौं, १४ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै संसद पुर्नस्थापना भएपछि नेकपाको दुवै समूह सक्रिय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारे प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाएपछि केही दिनदेखि निष्कृय रहेका नेकपाका दुवै समूह छलफलमा जुटेका हुन् । अदालतको फैसलापछि आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले विजयोत्सवका रुपमा लिँदै खुसीयाली मनाएको छ । यस्तै […]
लेटाङमा कांग्रेसको प्रशिक्षण
लेटाङ ,११ साउन । मोरङको लेटाङमा काँग्रेसले प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ । नेपाली काँग्रेस मोरङको जिल्ला प्रशिक्षण शाखाको आयोजनामा आधारभुत प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको हो । प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम सांसद डा. डिला संग्रौला रहनुभएको थियो । सहभागी तिनसय बढि कार्यकर्तालाई डा.संग्रौला, कांग्रेस जिल्ला सदस्य रामप्रसाद पोखरेल, केन्द्रिय नीति तथा […]
लेटाङ नगरपालिकाको सातौ नगरसभामा ५९ करोड ५० लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत
लेटाङ, १० असार । बुधबार बसेको लेटाङ नगरपालिकाको सातौं नगरसभामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ का लागि ५९ करोड ५० लाखकोे बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिएको छ नगरसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट अनुमान अनुसार आगामी बर्षका लागि नगरपालिकाले चालु खर्च तर्फ ३० करोड २५ लाख ५० हजार र पूँजीगत खर्च २८ करोड ८९ लाख रुपैया […]
नेकपाले संसद बन्धक बनायो – सभापति लिम्बू
लेटाङ,२८ पुस । नेपाली कांग्रेसका माेरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बूले नेकपाकाे आन्तरिक विवादले संसद बन्धक बनेको बताउनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस लेटाङ नगर समितिकाे समायोजन एवम् सफत ग्रहण कार्यक्रममा बाेल्दै उहाँले साे कुरा बताउनु भएको हाे । देशमा सरकार छ,वा छैन ? त्यो अनुभुति हुने गरि नेकपाले काम नगरेको बताउँदै सभापति लिम्बूले संसदमा सयाै विधेयक […]
‘धरानको नतिजा जनताको जित हो’ -डिगवहादुर लिम्बु
बिराटनगर । नेपाली काँग्रेसबाट धरान उपमहानगरपालिकामा उपनिर्वाचनबाट मेयर पदमा विजयी कांग्रेसी नेता तथा पूर्व साँसद डिगबहादुर लिम्बूले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ । पार्टीको मोरङ सभापति समेत रहेका लिम्बूले धरानवाशीको जित भएको बताउनुभयाे । उहाँले सामाजिक सन्जालमा लेख्नुभएकाे छ, बिजय एउटा सुखद क्षण पनि हो,जस्ले असिम आनन्द दिन्छ। नेपाली काङग्रेसका मेयर पदका उमेद्वारको जित धरान […]
लेटाङमा मनाईयो संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस
लेटाङ, ३ असोज । लेटाङ नगरपालिकाले पाँचौ संविधान दिवश तथा राष्टिय दिवश मनाएको छ । प्रभात फेरी सहित नगरपालिका प्राङ्गणमा एक कार्यक्रम गरि यो दिवस मनाईएको हो । नगरप्रमुख तथा कार्यक्रममा सभाध्यक्ष शंकर राईले संविधान जनताको बलिदान वाट आएको र सिंहदरबारको अधिकार गाँउमा समेत ल्याउने उदेश्य रहेकाले भुप्रो भित्रका विपन्न जनताले समेत संविधान आएको खुसिमा […]
संविधान अनुपम दस्तावेज : वरिष्ठ नेता नेपाल
काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालको संविधान विश्वकै अनुपम दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) ले आज आयोजना गरेको ‘संविधानमा बालबालिका’ विषयक अन्तरक्रियामा नेता नेपालले संविधानसभाबाट पारित भएको संविधानमा सबै खालका विचार […]
नगर कांग्रेसले मनायो १०५ औ विपि जयन्ती , नेकपाका पिएम नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश
लेटाङ २० भदौ । १०५ औ विपि जन्मजयन्तीको अवशरमा नेपाली कांग्रेस लेटाङले कार्यक्रम गरेको छ । आज जनसेवा सामुदायिक बनको सभाहलमा नेपाली कांग्रेस मोरङका सहसचिव तथा सुन्दरहरैचा नगर प्रमुख शिव ढकालको प्रमुख आतिथ्यता र नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा लेटाङ नगरप्रमुख शंकर राईको विशिष्ठ आतित्थ्यतामा कार्यक्रम गरिएको नेपाली कांग्रेस लेटाङका सचिव कुवेर पौडेलले जानकारी दिनुभयो […]
Page 1 Page2… Page9->>
दुई नंबरी इटा प्रयोगका बिसयमा समाचार लेखेको भन्दै एमाले कार्यकर्ता द्वारा लेटाङ खबर लाई कारबाहिको माग
वैज्ञानिक भन्छन्- मलाशयको क्यान्सर निको पार्ने औषधि पत्ता लाग्यो